Orinasa sy mpamatsy Sodina miendrika endrika manokana China XUANZE
Ny fantsona miendrika manokana dia karazana fantsom-by tsy misy vy vita amin'ny sary mangatsiaka. Ny fantsom-by vy tsy misy fangarony manokana dia teny ankapobeny amin'ny fantsom-by tsy misy fangarony miaraka amin'ny endrika hafa miampita afa-tsy ny fantsom-boribory.
Ny fantsona miendrika manokana dia karazana fantsom-by tsy misy vy vita amin'ny sary mangatsiaka. Ny fantsom-by vy tsy misy fangarony manokana dia teny ankapobeny amin'ny fantsom-by tsy misy fangarony miaraka amin'ny endrika hafa miampita afa-tsy ny fantsom-boribory. Araka ny endrika sy haben'ny fizarana fantsom-by dia azo zaraina ho karazany telo izy: mitovy hatevin'ny rindrina vy tsy misy fantsona, fantsom-baravarana tsy mitovy fitoviana fantsom-by tsy misy fangarony, savaivony vy tsy miovaova savaivony.
Ny fantsom-by vy tsy misy fangarony manokana dia be mpampiasa amin'ny faritra maro samihafa, fitaovana ary faritra mekanika. Raha ampitahaina amin'ny fantsom-boribory, ny fantsona miendrika manokana dia manana fotoana inertia lehibe kokoa ary fizarana modulus, ary manana fanoherana lehibe kokoa sy torsion, izay afaka mampihena be ny lanjan'ny firafitra sy mamonjy vy.
Ny fampandrosoana ny fantsona miendrika manokana dia ny fampiroboroboana ireo karazana vokatra, ao anatin'izany ny endrika fizarana, fitaovana ary fampisehoana. Ny fandroahana fantsom-panafody, ny fivezivezena ary ny fanaovana sary mangatsiaka dia fomba mahomby hamokarana fantsona miendrika manokana, izay mety amin'ny famokarana fantsona miendrika manokana miaraka amin'ireo faritra sy fitaovana samihafa. Mba hamokarana fantsona miendrika endrika manokana dia tsy maintsy manana fomba famokarana isan-karazany isika.
Ny fantsom-by vy manokana dia azo zaraina ho fantsom-by boribory boribory lavalava, fantsom-by vy miendrika telozoro, fantsom-by vy miendrika hexagonal, fantsom-by vy miendrika boribory, fantsom-by vy miendrika efamira, faribolana vy miendrika hexagon, fantsom-by vy tsy mitovy fitoviana, plum dimy felany manokana- fantsom-by, fantsom-by miolikolika, fantsona vy miendrika kofehy, fantsom-boaloboka miendrika kofehy vy, pipa vy miendrika kôlôjika ary fantsom-by miendrika endrika mihombo.
1. Ho an'ny tranokala na trano fanatobiana entana dia tahirizina ireo vokatra fantsom-by vita amin'ny vy manokana, dia tokony hofidina amin'ny toerana madio sy milamina izy io, ary lavitra ny orinasa sy ny toeram-pitrandrahana misy entona na vovoka manimba. Ny tany dia tokony diovina amin'ny tsimparifary sy ny sundries rehetra mba hitazomana ny fahadiovan'ny vy.
2. Ao amin'ny trano fanatobiana entana dia tsy mahazo miangona miaraka amina asidra, alkaly, sira, tanimanga ary fitaovana hafa manimba vy. Ny karazana vy isan-karazany dia tokony sokajiana ary apetaka mba hisorohana ny fikorontanana sy ny fifandraisana amin'ireo zavatra manimba.
3. Ny fantsom-by vy lehibe, ny lalamby, ny takelaka vy, ny fantsom-by vy lehibe ary ny fametahana dia azo apetraka amin'ny rivotra malalaka.
4. vy kely sy salantsalany vy vy, tariby tariby, bara vy, fantsom-by vy savaivony, tariby vy ary tady tariby vy dia azo tehirizina ary hapetraka ao anaty fitoeram-bokatra amin'ny rivotra madio, ary zava-dehibe ny manarona ny tampony sy ny pad ny farany ambany.
5. vy kely refy, takelaka vy manify, vy esorina, savaivony kely na fantsom-by miendrika vy manokana, vokatra vy milomano mangatsiaka sy mangatsiaka isan-karazany ary vokatra metaly misy vidiny lafo sy mora simba azo tehirizina ary hapetraka ao anaty fitehirizana.
6. Ny trano fanatobiana entana dia tokony hofidina arakaraka ny toe-piainana ara-jeografika, ary ny trano fitehirizam-bokatra nikatona dia tokony hampiasaina raha heverina fa mety, izany hoe ny trano fanatobiana entana misy tafo misy rindrina, varavarana tery ary fitaovan'ny rivotra.
7. Ny trano fitehirizam-bokatra dia tokony hitazona hatrany ny toerana fitahirizana sahaza azy, ny fifantohana amin'ny rivotra mandritra ny andro mafana, ary akaiky hisorohana ny hamandoana amin'ny andro orana.
Previous: Sodina Sodina tsy misy savony
Manaraka: Steelpipe voatsabo hafanana